यस कारण WWE को ‘अलेक्जेण्डर’ रोमन रेन्सले छाडे रिङ्ग, कमब्याकको कति सम्भव ? « News24 : Premium News Channel
यस कारण WWE को ‘अलेक्जेण्डर’ रोमन रेन्सले छाडे रिङ्ग, कमब्याकको कति सम्भव ?
काठमाडौं, ६ कात्तिक । डब्लुडब्लुई (WWE) को ‘अलेक्जेण्डर’ रोमन रेन्सले रिङ्ग छोडेका छन् । (WWE Universal Champion ) डब्लु डब्लु इ युनिभर्सल च्याम्पियनशिप रोमन रेन्सलाई ल्युकिमिया (Leukemia) भएको छ । जसको कारण उनले डब्लुडब्लुई (WWE)को रिङ्ग केही महिनाको लागि छाडेका हुन ।
डब्लु डब्लु इको मण्डे नाइट र्व (WWE, Monday Night Raw)मा आफुलाई ल्युकिमिया भएको र उपचार गर्नको लागि रिङ्ग छाडेको भन्दै रोमन रेन्सले घोषणा गरेका हुन् ।
रोमन रेन्सले ल्युकिमिया जस्ता गम्भीर रोगको शिकार भएर पनि कराडौैंलाई मनोरञ्जन दिदै आएका थिए । ल्युकिमिया एक प्रकारको ब्लड क्यान्सर हो । यो ब्लड सेल्स बढ्ने रोग हो ।
ल्युकिमिया भएपछि ह्वाइट ब्लड सेल्सको डीएनएमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । रोमन रेन्सले बताए अनुसार, ११ वर्षको उमेरमा उनि यो रोगको शिकार बनेका थिए । उपचारपछि यो रोगबाट छुटकरा पाउँदै आएका रोमन रेन्सलाई पुनः यो रोगले च्यापेको हो ।
रोमन रेन्सको यो फैसलाले वल्र्ड रेसलिङ्ग इन्टरटेन्मेन्टमा सबैलाई दुखी बनाएको छ । किनभने उनी डब्लुडब्लुइको सुपरस्टार हुन्, भने करोडौंको मन जितिसकेका छन् । उनले राम्रा राम्रा सबै खेलाडीहरुलाई हराईसकेका छन् ।
रोमनले रिङ्ग छोड्दै गर्दा आफ्नो साथमा भएको डब्लुडब्लुई युनिभर्सल च्याम्पियनशिप (WWE Universal Champion) पनि फिर्ता गरेका छन् । रोमनको यस्तो फैसलाले उनको फ्यानहरु निकै दुखी भएका छन् । नेपालमा पनि रेस्लर रोमनको लाखौं फ्यान फलोइङहरु छन् ।
ल्युकिमिया के हो ?
५५ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहको मानिसलाई यो रोग लाग्ने गर्दछ । रोमन रेन्सको यो रोगको उपचार सम्भव छ । सही तरिकाले उपचार गरिएमा रोमन रेन्स चाँडै निको भएर पुनः रिङ्गमा फर्कनेछन् ।
ल्युकिमियाका कारण मानिसलाई चाँडै थकान लाग्ने, ज्वरो आइरहने, तौल घट्दै जाने, जार्नीको दुखाई बढ्दै जाने र छालाको रङ्ग परिवर्तन हुँदै जाने लगाएतको लक्षणहरु देखा पर्छ ।